Umkhwa weNetflix uza kwimidlalo yevidiyo kunye neUtomik | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umkhwa weNetflix uza kwimidlalo yevidiyo kunye neUtomik
UJose Angel | | ngokubanzi, Ukuphefumlelwa
Ukuba iNetflix isete umkhwa kwindlela yokubukela i-cinema namhlanje, ayisiyongxaki ukuba imidlalo yevidiyo ngoku. Kwaye sonke siyalazi iqonga leNetflix namhlanje. Ubuncinci beemovie kunye noluhlu lomxholo kunye nokuthengwa. Iimveliso ezinjengezakho 'Eqaqambileyo' okanye ezinye iifilimu. IScorsese, iTarantino, iNolan… Abalawuli beefilimu ababalaseleyo banendawo yabo kuye. Ukusuka apho, i-HBO, iMovistar plus, njl. Ngubani oza ku-Utomik?
U-Utomik uthathe le meko kwaye wayisa emhlabeni wakhe. Ukuba iNetflix ngomnye wookumkanikazi bobugcisa besixhenxe, u-Utomik uzenza ngathi ukwimidlalo yevidiyo. Iqonga apho ngobhaliso lwarhoqo ngenyanga 'unokurenta' ukungapheli kwemidlalo yevidiyo ngaphandle kwemida yokudlala. Oku kubonakala kukhokelela ekuphelisweni kwemidlalo ebonakalayo. Qasha umdlalo wevidiyo kwaye uwudlale de udikwe, kuba 'ndihlangule'kwakhona kwaye ukhuphele enye.
1 Yintoni iUtomik?
2 U-Utomik usebenza njani?
3 Ukusuka eBatman ukuya kwiMetro 2033
Sikhule ukusuka kwisiqalo esizimeleyo ngaphandle kwenkxaso yeshishini ekubeni sibe nelayibrari yemidlalo engaphezulu kwe-750 nangaphezulu kwamaqabane e-100 okupapasha kwiminyaka nje emibini. Inkxaso ibandakanya iWarner Bros. Imidlalo, iDisney, i-SEGA, i-THQ Nordic, iMidlalo ye-Epic, i-Curve Digital, i-IO Interactive, nezinye ezininzi. Ingaphezulu kwayo nayiphi na iqonga lokudlala elibhalisiweyo kwaye sisiqalo nje.
Yayisungulwa kwi-2014 luluntu lwabadlali beDatshi kwaye kwi-2016 ingxelo yokuqala ye-beta yakhutshwa. Ngokuqatshelwa kwamanye amazwe ukuza kuthi ga ngoku, ikhupha ingxelo yayo yokugqibela kwaye yenziwa ngempumelelo.
“Njengokuba sisungulwe ngokusesikweni, abasebenzisi bafumana ukufikelela okungenamda kokudlala ngaphezulu kwemidlalo engama-750 nge- $ 6.99 ngenyanga * okanye i- $ 9.99 ngenyanga kwisicwangciso sosapho sesine. Ukukhutshwa kuya kubandakanya uyilo olutsha noluphuculweyo lwabathengi. "
Ngokuqaliswa kwemidlalo engaphezulu kwe-750 kulula ukwenza ukubala entlokweni yakho, ukwazi inzuzo yeprojekthi. Ukuba umdlalo we-notch ephezulu unyukela kwi-80 euros, ukuhlawula i- € 6,99 okanye i- € 9,99 inyanga nenyanga phakathi kwabantu abane kuya kuba luncedo ngakumbi. Kwaye bonke ekhaya kwaye ngaphandle kokulinda. Kukwaquka nolawulo lwabazali lwabantwana.
U-Utomik usebenza njani?
Okwangoku, ikhathalogu ye-Utomik ineemidlalo ezingama-765 ezivela kwiinkampani ezidumileyo ezingama-50. Ukusuka kwiWarner ukuya kwiDisney ngezinye iinkampani ezidumileyo ezinje ngeSEGA, iMidlalo yeTalltale okanye i-THQ, phakathi kwabanye. Ikhathalogu ekhula kwinqanaba le-15 okanye i-20 yemidlalo yevidiyo ngenyanga, njengoko inkampani isitsho kwiwebhusayithi yayo.
Into ebalulekileyo iya kuba kukukhutshelwa. Namhlanje, ukusuka kwi- ivenkile nakweyiphi na ikhonsoli yomdlalo okanye iqonga Steam Kwi-PC, ukuthenga umdlalo kwi-intanethi kunye nokukhuphela kunzima. Utomik uthembisa ukuba ayizukuba njalo.
Xa ukhuphela umdlalo wevidiyo, kuya kufuneka ulinde ubuncinci bexesha lokulayisha umxholo obalulekileyo ukuze uqale. Nje ukuba lo mthwalo, unokuba yi-20% yomdlalo wevidiyo uwonke, sele wenziwe, ungaqala ukudlala. Ngelixa udlala, ezinye ziya kukhutshelwa ngasemva. Oku akuyi kuchaphazela amava okudlala. Ngale ndlela iya kunika ibhonasi kubadlali abanomdla wokudlala.
Ukusuka eBatman ukuya kwiMetro 2033
Ngaphandle kwento yokuba kule minyaka mibini idlulileyo iinkampani ezininzi zisungule iinkonzo ezifanayo, njengoko kunjalo PlayStation ngokuKukho ulindelo olukhulu olubekwe kweli qonga, elijolise ekubeni yi-'Netflix yemidlalo yevidiyo 'emva kokufikelela kwisivumelwano neenkampani ezingaphezu kwekhulu ngexesha lesigaba senkonzo.
Okwangoku, ayinalo amagama anjalo. I-Fifa okanye i-Call of franchise yomsebenzi ayinasithuba kwaye ukukhutshwa okukhoyo kunexesha elininzi. Kodwa ekukhuleni kwabo nasekusebenzeni neenkampani ezinjengeDisney, iWarner, i-SEGA, ayizukulinda ixesha elide xa ezi franchise zibajoyina.
Kulabo sele bekwinguqulelo yabo ye-BETA njengamadlelane anyanisekileyo enkampani, ixabiso liya kufana nelabo. Ukujonga ngoluhlobo kwi-5,99. Ngalo lonke ixesha lokubhaliselwa kwabo, ngaphandle komda weminyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Umkhwa weNetflix uza kwimidlalo yevidiyo kunye neUtomik
Umceli mngeni weelogo ezingama-365 zomyili ogcina intsingiselo kuchwethezo lwabo
Imiyalelo emithandathu enyanzelekileyo ngaphambi kokunikezela ngeshishini